WAR WAXAAD RABTAAD SAMEYSAA DALKUNA KAA DAAL! Diego Simeone seedigiis oo kabaha la dul maray Lionel Messi – Gool FM
Kaafi May 9, 2016
(Buenos Aires) 09 Maajo 2016. Seediga tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa ku edeeyey Messi in uu wax walba oo uu rabo sameeyo isaga oo u doorta Argentina tababaraha uu rabo, xulana ciyaaryahanada uu doonayo.
Carlos Dibos, kaas oo jir dhise ka ahaa xulka Argentina 2006 ilaa iyo 2008 xilligaas oo uu hogaaminayey Alfio Basile ayaa sheegay in xiddiga Barcelona uu sameeyo safka una yeero ciyaaryahanada iyo waliba tababaraha qeybta farsaada or orda.
Meesi waa furaha Argentina laakiin wali ma uusan la qaadin koob weyn isaga oo geeyey fiinaalaha koobkii aduunka ee 2014 – waxaa ka qaaday Germany.
Laacibka iminka haysta Ballon d’Or-ka ayaa ku sigtay in uu seego Copa America laba jeer iyada oo ay tababareyaasha qiimeyn jireen isku darka xirfadiisa iyo weeraryahanada kale sida Carlos Tevez, Sergio Aguero iyo Gonzalo Higuain.
Laakiin Dibos waxa uu ku adkeysanayaa in dhaqanka Messi ay saameyn xun kuwada yeelatay dhamaan dadka xiriirka la leh xulka Argentina waxa uuna la hadlay Raadiyaha La red isaga oo yiri: “Dadka waxa ay ka daaleen dhaqanka weeraryahanka.
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri: “Messi waxa uu doortaa tababareyaasha iyo ciyaaryahanada wuuna sameeyey wax walba ee uu ka rabay xulka qaranka.
“Hada runta banaanka ayey taal, waan ka daalnay dhaqankiisa Argentina. Taas waa cadeeneynaa.
“Caro, maser iyo isla jecli waxa ay micneheedu tahay in dadka dalka ay aragtiyo kala duwan oo wali ah leeyihiin. Ma aamini karo in saxafiyiin iyo falanqeyeyaal qaar ay qabaan in Simeone uusan xulka maamuli karin maxaa yeelay Messi ayaan rabin in uu xilka qabto. Wey walan yihiin.”
Isaga oo ka hadlaya seedigiis, Dibos waxa uu yiri: “Nasiibka ma saacidin fiinaalahiisii Champions league ee labaad.
“Diego si joogta ah ayuu u shaqeeyaa. Waxba fursad ma siiyo. Tan iyo markii aan guursaday walaashiis 20 sano kahor waqti badan ayaan la qaatay.
“Waan daawadaa daruusta tababaradiisia waxaana u bixiyey koofiyada shaqo uu sameenayo darted.”